una cookie ကို ၎င်းသည်စာသားဖိုင်ဖြစ်သည် ဘေးကင်းသော မည်သည့်ဝဘ်စာမျက်နှာနီးပါးကိုမဆိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည့်အခါ၎င်းကိုသင်၏ဘရောက်ဇာတွင်သိမ်းထားသည် ၏ utility ကို cookie ကို သင်သည်ထိုစာမျက်နှာကိုသွားရန်ပြန်လာသည့်အခါဝဘ်သည်သင်၏လည်ပတ်မှုကိုမှတ်မိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူအများစုကမသိသော်လည်း cookies တွေကို သူတို့ဟာ World Wide Web အတွက်ပထမဆုံး browser များပေါ်လာသည့်အခါအနှစ် ၂၀ လုံးလုံးအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ပါ၊ Trojan မဟုတ်ပါ၊ တီကောင်မဟုတ်၊ spam မဟုတ်ပါ၊ spyware လည်းမဟုတ်ပါ၊ pop-up windows လည်းမရှိပါ။
မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်က? cookie ကို?
အ cookies တွေကို သူတို့သည်သင့်အကြောင်းအထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်အသေးစိတ်၊ ဓာတ်ပုံ၊ သူတို့သိမ်းဆည်းထားသည့်အချက်အလက်များသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝ၊ ကိုယ်ပိုင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာများ၊ ပါဝင်သည့်အရာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဝဗ်ဆာဗာသည်သင့်အားလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Internet Explorer ကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုပြီး Firefox သို့မဟုတ် Chrome နှင့်အတူထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသာကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားပါကထိုဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သင်နှင့်တူညီသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုသူသည်မဟုတ်ဘဲဘရောက်ဇာကိုအမှန်တကယ်ဆက်စပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုမျိုးလဲ cookies တွေကို တည်ရှိလား။
ကွတ်ကီးနည်းစနစ်များ - ၎င်းတို့သည်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အခြားအရာများအကြား၊ လူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ဖွင့်နေသည်၊ အမည်မသိအသုံးပြုသူနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများကြည့်ရှုနေစဉ်၊ မည်သည့်ပြောင်းလဲနေသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသိရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကွတ်ကီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးသပ်မှု - သင်လုပ်နေတဲ့သွားလာမှုအမျိုးအစား၊ သင်အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ကဏ္,များ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသောထုတ်ကုန်များ၊ သုံးစွဲချိန်အချိန်ဇယား၊ ဘာသာစကားစတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသူတို့စုဆောင်းတယ်။
ကွတ်ကီးကြော်ငြာခြင်း။ ။ သူတို့သည်သင်၏ကြည့်ရှုခြင်း၊ မူရင်းနိုင်ငံ၊ ဘာသာစကားအစရှိသည်တို့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးကြော်ငြာကိုပြသသည်။
သူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ cookies တွေကို ကိုယ်ပိုင်နှင့်တတိယပါတီများ၏သူတို့အား?
အ ကိုယ်ပိုင် cookies တွေကို သင်လည်ပတ်နေသည့်စာမျက်နှာနှင့်သင်ထုတ်ပေးသောသူများဖြစ်သည် တတိယ ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာ၊ ဂူဂဲလ်ကဲ့သို့သောပံ့ပိုးသူများကထုတ်ပေးသောအရာများဖြစ်သည်။
ငါ disable လုပ်လျှင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ cookies တွေကို?
သငျသညျကို deactivating ၏အတိုင်းအတာကိုနားလည်စေရန် cookies တွေကို ဥပမာအချို့ကိုငါပြမယ်။
ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်၏ကိုယ်ပိုင်areaရိယာကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ အကြှနျုပျ၏အကောငျ့ကိုသို့မဟုတ် အကြှနျုပျ၏ပရိုဖိုင်းကိုoငါ့မှာကြားချက်များ.
အွန်လိုင်းစတိုးများ - သင်အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုကိုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စတိုးဆိုင်တစ်ခုရှိလျှင်ဖြစ်စေဆိုင်သို့သွားရန်ရှိသည်။
သင်၏အချိန်ဇယား၊ ငွေကြေးသို့မဟုတ်ဘာသာစကားစသည့်သင်၏ပထဝီဆိုင်ရာ ဦး စားပေးများကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်လာရောက်လည်ပတ်သူနှင့် ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိအသွားအလာများကို web analytics မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ဝဘ်ကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်ခက်ခဲစေသည်။
သင်ဘလော့ဂ်တွင်ရေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ဓာတ်ပုံများ တင်၍ လည်းမရနိုင်ပါ၊ မှတ်ချက်များကိုတင်ပေးနိုင်မည်၊ အကြောင်းအရာကိုအဆင့်သတ်မှတ်မည်၊ သင်ဟာလူသားတစ် ဦး လား (သို့) ထုတ်လွှင့်တဲ့အလိုအလျောက်အသုံးချပရိုဂရမ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုလည်းကွန်ရက်ကသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး စပမ်း.
၀ က်ဘ်၏ကြော်ငြာဝင်ငွေကိုလျှော့ချမည့်ကဏ္ will ဆိုင်ရာကြော်ငြာကိုပြသရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အားလုံးသည်အသုံးပြုသည် cookies တွေကိုအကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့အားပိတ်ထားပါကသင်သည်မည်သည့်လူမှုကွန်ယက်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
သင်ဖယ်ထုတ်လို့ရမလား cookies တွေကို?
ဖယ်ရှားပစ်ရန် cookies တွေကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏သင်၏ဘရောက်ဇာ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုသင်သွားရမည်။ ထိုတွင်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောဒိုမိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သူများကိုရှာဖွေပြီး၎င်းတို့အားဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
ပြင်ဆင်ခြင်း cookies တွေကို လူကြိုက်အများဆုံး browser များအတွက်
ဒီနေရာတွင်တစ် ဦး ကိုဘယ်လိုဝင်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ် cookie ကို browser ဆုံးဖြတ်သည် Chrome ကို။ မွတ္စု: ဤအဆင့်များသည် browser ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်
ချိန်ညှိချက်များ (သို့) စိတ်ကြိုက်များကို File menu မှသို့မဟုတ်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ personalization icon ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သွားပါ။
ကွဲပြားသောကဏ္seeများကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်၊ ထိုရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ Show ကိုအဆင့်မြင့် Options များ.
သွားပါ သီးသန့်လုံခြုံရေး, အကြောင်းအရာ settings ကို.
ကို Select လုပ်ပါ အားလုံး cookies နှင့် site ကိုဒေတာ.
အားလုံးနှင့်အတူစာရင်းတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် cookies တွေကိုဒိုမိန်းအားဖြင့်ခွဲထားခဲ့သည် သင်ပိုမိုလွယ်ကူသင်ရှာတွေ့မှ cookies တွေကို အချို့ဒိုမိန်းတစ်ခု၏နေရာသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းလိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ ကွတ်ကီးများကိုရှာပါ.
ဤ filter ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပါကလိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောမျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည် cookies တွေကိုတောင်းဆိုထားသောဝဘ်၏။ အခုသင်ရွေးလိုက်ရုံပါပဲ X ယင်း၏ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။
access ကို setting များကိုရန် cookies တွေကို browser Internet Explorer ကို ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ (၎င်းတို့သည် browser ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်):
သွားပါ Tools များ, Internet Options ကို
သင်လိုချင်သော privacy level ကိုချိန်ညှိရန် slider ကိုရွှေ့ပါ။
access ကို setting များကိုရန် cookies တွေကို browser Firefox ကို ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ (၎င်းတို့သည် browser ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်):
သွားပါ ရွေးချယ်မှုများo ဦးစားပေး သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်ပေါ်မူတည်သည်။
En စံချိန်ရွေးချယ်ပါ သမိုင်းအတွက်ထုံးစံဆက်တင်ကိုသုံးပါ.
ယခုသင် option ကိုမြင်လိမ့်မည် cookies တွေကိုကိုလက်ခံ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနှင့်အညီ၎င်းတို့ကိုသက် ၀ င်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပိတ်နိုင်သည်။
access ကို setting များကိုရန် cookies တွေကို browser OSX အတွက် Safari ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ (၎င်းတို့သည် browser ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်):
သွားပါ ဦးစားပေးထိုအခါ သီးသန့်လုံခြုံရေး.
ဒီနေရာမှာ option ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် ပိတ်ပင်တားဆီးမှု cookies တွေကိုသင်လုပ်ဆောင်လိုသောသော့ခတ်အမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ရန်။
access ကို setting များကိုရန် cookies တွေကို browser iOS အတွက် Safari က ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ (၎င်းတို့သည် browser ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်):
သွားပါ setting များကိုထိုအခါ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း.
သွားပါ privacy နဲ့လုံခြုံရေး, သင် option ကိုမြင်လိမ့်မည် ပိတ်ပင်တားဆီးမှု cookies တွေကိုသင်လုပ်ဆောင်လိုသောသော့ခတ်အမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ရန်။
access ကို setting များကိုရန် cookies တွေကို ကိရိယာများအတွက် browser ကို အန်းဒရွိုက် ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ (၎င်းတို့သည် browser ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်):
Browser ကိုဖွင့်ပြီးသော့ကိုနှိပ်ပါ မီနူးထိုအခါ setting များကို.
သွားပါ လုံခြုံရေးနှင့် privacy, သင် option ကိုမြင်လိမ့်မည် cookies တွေကိုကိုလက်ခံbox ကို enable သို့မဟုတ် disable လုပ်ဖို့။
access ကို setting များကိုရန် cookies တွေကို ကိရိယာများအတွက် browser ကို က Windows Phone ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ (၎င်းတို့သည် browser ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်):
ဖွင့်လှစ် Internet Explorer ကိုထိုအခါ ပိုပြီးထိုအခါ configuration ကို
ယခုသင် box ကို activate သို့မဟုတ် deactivate လုပ်နိူင်တယ် cookies တွေကိုခွင့်ပြု.